Iker Casillas oo ka hadlay mustaqbalka Zidane iyo Ramos ee kooxda Real Madrid – Gool FM
Dajiye December 4, 2020
(Madrid) 04 Dis 2021. Iker Casillas ayaa xaqiijiyay in Zinedine Zidane uu u qalmo inuu kusii sugnaado hogaanka kooxda Real Madrid isla markaana uu awoodo inuu ka baxo xaallada adag iyo natiijooyinka xun ee kooxdu dhawaan la kulantay.
Casillas ayaa ku dhawaaqay inuu ka fadhiistay ciyaarista kubadda cagta 4-tii Ogosto 2020, kaddib waayo qurux badan ee dhanka shabaq ilaalinta uu ku soo qaatay kooxda Real Madrid ama xulka Spain.
Haddaba Iker Casillas ayaa ka hadlay xaallada adag ay haatan ku sugan tahay kooxda Real Madid, wuxuuna yiri:
“Ugu horeyntii, Real Madrid waxay wali ku tiirsan tahay Champions League, masiirkeeduna wuxuu ku jiraa gacanta kulanka ugu dambeeya ee wareega group-yada.”
“Dhanka horyaalka waxay ku jirtaa xaallad wanaagsan oo la mid ah kooxaha kale.”
“Zidane, waa tababare iyo saaxiib wanaagsan waxaana qabaa inuu awood u leeyahay inuu sameeyo wax walba oo macquul ah si uu ugu soo celiyo Real Madrid heerkii ugu sareeyay ee suurtagalka ah .. kuma noolaan kartid guulahaadii hore laakiin mar hore ayuu kasbaday in la aamino.”
Intaas kaddib Iker Casillas ayaa ka hadlay arrinta ku saabsan heshiis kordhinta Sergio Ramos, wuxuuna yiri:
“Sergio Ramos wuxuu astaan ​​u yahay Real Madrid, waan inay sii joogaan ciyaartoyda ugu fiican Madrid.”